About me & this web site – Thiha Oo
admin Comments Off on About me & this web site
My name is Thiha Oo. I am from Myanmar. My home town is Mandalay which is in central part of Myanmar. I received Bachelor of Computer Science degree from University of Computer Studies Mandalay, Myanmar. I came to Singapore in 2007 to attend MSC course at School of Computer Engineering in NTU. I stayed and worked in Singapore till October 2015. I moved to California, USA in Nov 2015. I am currently staying and working in Los Angeles, CA, UsA. I haveagreat interest in computers, gadgets, programming, digital multimedia and gaming. My favorite game series is “Resident Evil” (You know?).
I started blogging in 2007 after I had arrived to Singapore. I initially used blogspot tool to write blogs. Afterafew years later, I wanted to create my own website with my personal domain name and hosting. Therefore, I boughtapersonal domain name for me and started this website in 2010. This web site has both Myanmar and English version blog posts and also some of my personal information on it.
This web site may not have very advanced and precise technological information. The articles on this web site are just based on my hobby. I hope the blog posts on this web site may be useful for those who are new to computer, programming, gaming and digital media. I just want to share what I know, my hobby and my experiences on this web site in very simple way.
စာရေးရတာ နဲနဲ ပါသနာပါတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က ၂၀၀၇ ခုနှစ် Singapore ကို စရောက်တဲ့ အချိန်ကထဲက blogspot ကို သုံးပြီး BLOG တွေရေးခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ blogspot ကို မသုံးတော့ပဲ ကိုယ်ပိုင် domain တစ်ခု ရယူပြီး ကိုယ်ပိုင် web site တစ်ခု လောက် ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူး မိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် domain+hosting ဖြစ်တဲ့အတွက် blogspot လို (မြန်မာနိုင်ငံမှာ) ဖွင့်ကြည့်လို့ မရတဲ့ ပြဿနာမျိုးလည်း မရှိတော့ဘူး ပေါ့နော်။
ဒီ web site ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် web site ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar version လိုပဲ English version လည်း ရေးထားပါတယ်။ အရင်က သုံးခဲ့တဲ့ blog spot က post တွေကိုလည်း ဒီ web site ဘက်ကို ရွှေ့ပြောင်း ထားပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ wordpress ကိုသုံးပြီး ဒီ website လေးကို စပြီး ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၃ ဇူလိုင်မှာ အကြီးစား ပြင်ဆင်မှု လုပ်ခဲ့ပြီး English blog post တွေရော၊ မြန်မာ blog post တွေကိုပါ ရောထားနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ များသော အားဖြင့် ကျွန်တော့ဝါသနာအရ Digital media နည်းပညာ နဲ့ ဆိုင်တာတွေနဲ့ ၊ game နဲ့ ပါတ်သက် တာတွေ၊ programming နဲ့ ဆိုင်တာတွေ၊ ပြီးတော့ တစ်ခြား technical နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေ ကိုပဲ ရေးဖြစ်၊ မျှဝေဖြစ်တာ များပါတယ်။
ဒီ web site မှာ အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေကို ပြောပြထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ ၀ါသနာတူသူ၊ တစ်ချို့သော နည်းပညာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ေးလများကို မသိသေးသူ တွေအတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အသုံးတည့်မယ့် articles လေးတွေ ပေးနိုင်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။